​झापाका सहकारीमा सात अर्ब रुपैयाँ बचत
​झापा । झापामा सञ्चालित सहकारी संस्थाले सात अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ बचत गर्न सफल भएका छन् । जिल्लामा रहेका ८५४ वटा सहकारी संस्थाले सात अर्ब ३९ करोड ७४ लाख बचत गरेका छन्..
​सैँतीस करदातामाथि कारबाही, राजस्व सङ्कलन १०१ प्रतिशत
लहान ।आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहानले आव ०७१र७२ मा ३७ जना करदातामाथि कारबाही गरेको छ । दर्ता भएर पनि लामो समयदेखि कर नबुझाएका मूल्य अभिवृद्धि करतर्फका २३, आय करतर्फका ११ जना र..
​सुनको मूल्य तोलाको ४७ हजार पाँचसय, चाँदी ६ सय ६० मा कारोबार
काठमाडौं । नेपाली बजारमा निरन्तर ओरालो लागिरहेको सुनको भाउ घट्ने क्रम अझै रोकिएको छ । मंगलबार सुनको भाउ तोलामा तीनसय रुपैयाँले घटेको छ । मंगलबार सुन तोलाको ४७ हजार पाँचसय रुपैयाँमा..
काठमाडौं । नेपाली जुत्ता घरको आयोजनामा राजधानीको जमल, महाराजगञ्ज र कुमारीपाटीका शोरुमहरुमा समरसेल मेला हुने भएको छ। आगामी बिहिवारदेखि सुरु हुने मेलामा नेपाली जुत्ताघरअन्तर्गत नेपालका चर्चित एवं ब्राण्डेड जुत्ता उत्पादक कम्पनीहरु..
​पहिलो पटक ग्यासको मूल्य घट्यो, पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ५० पैसा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थका साथै खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि आयल निगमले मूल्य समायोजन गरेको हो । निगमले पेट्रोल, डिजेल..
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले उत्पादन वृद्धि नभएसम्म आयात नघट्ने बताएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आज सिहंदरबारमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उहाँले आयातलाई प्रतिस्थापन नगरेसम्म निर्यात नबढ्ने र..
अन्तःशुल्कबाट करिब साढे ८ अर्ब सङ्कलन
चितवन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको मुख्य राजस्वको हिस्सा अन्तःशुल्कले ओगटेको छ । चितवन र नवलपरासीको दाउन्ने पूर्वका क्षेत्र हेर्दै आएको यस कार्यालय राजस्व कार्यालयमध्येको सङ्कलनको हिसाबले देशकै दोस्रो ठूलो..
​सगरमाथा सिमेन्टको ‘डिलर मिट’ पोखरामा सम्पन्न
पोखरा । सगरमाथा सिमेन्टको थोक विक्रेताहरुको ‘डिलर मिट’ पोखरामा सम्पन्न भएको छ । त्रिवेणी ग्रुपको उत्पादन सगरमाथा सिमेन्टले थोक विक्रेताहरुलाई हौषला प्रदान गर्दै आक्रामक बजार प्रवर्द्धन कसरी गर्न सकिन्छ रु..
​अशुद्ध पानी उत्पादन गरी बेचेको भन्दै १८ वटा खानेपानी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अशुद्ध पानी बेचेको भन्दै डेढ दर्जन पानी प्रशोधन उद्योगमाथि मुद्दा चलाएको छ। कतिपय उद्योगहरुले प्रशोधन गरेको पानी दुषित पाइएको र कतिपय उद्योग..
​बहुराष्ट्रिय कम्पनीले रोयल्टी तिरेनन्
चितवन । चितवनको भरतपुरमा रहेका बहुराष्ट्रिय (मल्टिनेसनल) कम्पनीले जिल्ला विकास समितिको रोयल्टी कर तिर्न अटेर गरेका छन् । यहाँको बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड र माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरीले पटकपटक ताकेता गर्दासमेत रोयल्टी..
​अठार करोड राजस्व सङ्कलन
भद्रपुर । मालपोत कार्यालय भद्रपुर, झापाले गएको आर्थिक वर्षमा कुल १७ करोड ९३ लाख ३३ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ। सो अवधिमा कार्यालयले नौ करोड ८२ लाख चार हजार राजस्व..
नेपालको विज्ञापन एजेन्सी लेमन, एड् स्टार २०१५ को अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघका सदस्य एजेन्सी लेमनले नेपालको विज्ञापन इतिहासमा प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता प्राप्त एड् स्टार्स कोरियाले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एड् स्टार्स विश्वको..
​सुन तोलाको ५० हजार दुईसय रुपैयाँमा कारोबार, चाँदी पनि सस्तो
काठमाडौं । सुनको भाउ चार महिनायताकै न्यून विन्दूमा झरेको छ । विहीबार सुन प्रतितोला ५० हजार दुईसय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ । यो मूल्य गत चैत १ गतेपछिकै न्यून हो..
​व्यापारघाटा सात प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाकोे कुल व्यापारघाटा ६ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भई देशको व्यापारघाट थप चुलिएको..
​खसीको भन्दै बाख्राको मासु बेच्दै
जनकपुरधाम । जनकपुर नगरक्षेत्रमा मासु व्यावसायीहरुले खसीको भन्दै बाख्राको मासु बेच्ने गरेको खुलेको छ । जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा ५० प्रतिशत बाख्राको मासु बिक्री हुने गरेको भेटिएको हो..
एक साताभित्र वाणिज्य नीति–२०७२ आउँछ : मन्त्री थापा
काठमाडौँ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाले वाणिज्य नीति–२०७२ एक साताभित्र आउने बताएका छन् । नेपाल पस्मिना उद्योग सङ्घको १४औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले उद्योगी, व्यवसायी तथा विज्ञको सुझाव..
काठमाडौ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि..
​रुसले कोकाकोला र पेप्सीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने
मस्को, एजेन्सी । रुसको पार्टी अफ पेन्सनर्सका प्रमुखले कोकाकोला र पेप्सीलाई रुसमा प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । अमेरिकामा रुस बिरोधी राजनीतिज्ञलाई सहयोग गर्न यी कम्पनीले भूमिका निभाएकाले यसमाथि रुसमा प्रतिबन्ध..
​सुनको भाउ तीन सय घट्यो
काठमाडौं । मंगलबार स्थानिय बजारमा सुनको भाउ तोलामा तीन सय रुपैयाँ घटेर किनबेच भइरहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन तोलाको ५१ हजार ४ सय रुपैयाँमा किनबेच..
५७ अर्ब डलरमा ४२१ थान जहाज अर्डर
एजेन्सी । युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसले एकैपटक ५७ अर्ब अमेरिकी डलर (५७ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको जहाज खरिद अर्डर प्राप्त गरेको छ। यति परिमाणको रकमबाट एयरबसले ४ सय २१ थान..
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष को ? तीनै उम्मेदवार भन्छन्: सहमतिको सम्भावना अझै छ
काठमाडौं । यही असार १८ गते हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा तीन जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, यस अघि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पराजित..
४० वर्ष टिक्ने बाँसको घरको मूल्य साढे तीन लाख रुपैयाँ, भूकम्प र आगो प्रतिरोधी
काठमाडौं । भूकम्पपछि बजारमा के कस्ता घर निर्माण गर्ने भन्ने चर्चा बाहिर आइरहँदा ‘हिमालय बेम्बो प्रालि’ले करिब पाँच लाखमै ४० वर्ष टिक्न सक्ने बासको घर निर्माण गर्न सकिने जनाएको छ..
​विज्ञापन संघको पश्चिमाञ्चल समिति गठन, संयोजकमा हुमागाईं
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघ (आन) को पश्चिमाञ्चल समिति गठन भएको छ । विज्ञापन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय छाता संगठन आनको नवगठित पश्चिमाञ्चल समितिको संयोजकमा पोखराका मिडिया व्यवसायी दुर्गा प्रसाद हुमागाईं चयन..
​गोँगबु क्षेत्रका होटलमा साढे ३२ करोडको क्षति
काठमाडौँ । भूकम्पबाट गोँगबु क्षेत्रका होटलमा करोडौँको क्षति भएको छ । भूकम्पबाट होटलका भवन भत्किँदा ३२ करोड ५८ लाख ५० हजार बराबरको क्षति भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । काठमाडौँ होटल व्यवसायी..
देश बाहिरीने भन्दा भित्रिने रकम १ खर्ब धेरै
काठमाडौं । भूकम्प गएको महिना बैशाखमा देशबाट बाहिरीनेभन्दा देश भित्रिने रकम (भुक्तानी सन्तुलन अर्थात शोधनान्तर स्थिति) १ खर्ब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँले धेरै छ । अघिल्लो वर्षको बैशाखमा यस्तो..
​दश महिनामा ७ खर्बको बैदेशिक व्यापार, आयात ६२८ अर्ब, निर्यात ७१ अर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । कुल व्यापारमध्ये ७० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ भने ६ खर्ब..
काठमाडौं । मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकिइरहेका बेला सरकारी निकायले भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै रहेको दाबी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत बैशाख महिनामा ७.१ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांक शुक्रबार..
​घट्यो मध्यपहाडी लोकमार्गको भाडा
वागलुङ । मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे हुन थालेपछि बागलुङ–बुर्तिवाङ सडकको यातायात भाडा घटेको छ । भाडा निर्धारण समितिले बागलुङ–बुर्तिवाङ सडकमा गुड्ने सवारीको भाडादर कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै यात्रुहरु सस्तो भाडामा यात्रा..
विराटनगर । पूर्वका चारवटा जुट उद्योग बन्द हुदा एक अर्बभन्दा बढीको लगानी डुब्नुका साथै झन्डै १२ हजार मजदुर बेरोजगार भएका छन् । लोडसेडिङ, कच्चापदार्थ र बजारको अभावका कारण्ँ जुट उद्योग..
​असारमा सुन बजार प्रभावित हुने
काठमाडौं । सुन कारोबार त्यति नहुने असार महिना यो वर्ष झनै प्रभावित हुने सुन ब्यवसायीहरुको अनुमान छ । अरु वर्षहरुमा पनि वर्षा, रोपाँइ र लगन कम हुने भएकोले त्यति उत्साहजनक..
Results 889: You are at page 27 of 30